पति को यस्तो माया ! आफू मरेपछि पनि पत्नीलाई आफ्नो माया यसरी दिई रहे.. « Sajha Page
पति को यस्तो माया ! आफू मरेपछि पनि पत्नीलाई आफ्नो माया यसरी दिई रहे..
एजेन्सी। अमेरिकाको क्यास्परकी एक महिला त्यतिबेला निकै चकित परिन् जब उनका पतिको मृत्यु भएको झण्डै एक वर्षपछि उनका पतिले पठाएको गिफ्ट उनको हातमा पुग्यो । त्यो दिन भ्यालेन्टाइन डेको दिन थियो । पहिले त उनलाई विश्वास लागेन कि उनका दिवंगत पतिले यो गिफ्ट पठाएका हुन् । तर जब उनले यसबारे थप खोजी गरिन् तब थाहा भयो यो गिफ्ट उनका पतिले नै पठाएका थिए । जब उनले गिफ्टसँग लेखिएको म्यासेज पढिन् उनी निकै भावुक भइन् ।
ब्योमिङ राज्यको क्यासपरकी शैली गोले र उनका पति जिम गोलेका दुई सन्तान छन् । क्यान्सरका कारण जिमको ४ वर्षपहिले मृत्यु भइसकेको छ । शैलीका अनुसार जिम एक पारिवारिक व्यक्ति थिए । उनीहरु १९८४ मा भेटेका थिए । लगत्तै उनीहरुले बिहे गरे । २०१२ मा जिमलाई क्यान्सर भएको थाहा भयो । यति खतरनाक रोग भएको थाहा हुँदा पनि उनी भित्रबाट निकै मजबुत थिए ।
जिम त्यसपछि २६ महिना बाँचे । २०१४ मा उनको मृत्यु भयो । २०१४ मा डाक्टरले जिमलाई भनेका थिए कि उनी अझै ४ महिना बाँच्नेछन् । जून २०१४ मा उनको मृत्यु भयो । त्यसको करिब ८ महिनापछि २०१५ को भ्यालेन्टाइन डेमा उनलाई फूलसहित एउटा गिफ्ट आयो । कार्डमा लेखिएको थियो ‘ह्याप्पी भ्यालेन्टाइन डे प्रिय, सधैं मजबुत रहनु, सधैं तिम्रो जिम ।’ सुरुमा शैलीलाई लागेको थियो कि यो सबै उनका छोराछोरीले पठाएका हुन् । तर, छोराछोरीलाई सोध्दा उनीहरुले आफूहरुले नपठाएको बताए ।
जब महिलाले कार्डको पछाडि हेरिन् त्यहाँ जिमको सेलफोन नम्बर थियो । शैलीले भनिन् ‘यो मेरो लागि निकै भावुक क्षण थियो किनकि मैले बुझिसकेकी थिएँ यो उनले नै पठाएका थिए ।’ शैलीका छोराले जब पसलमा फोन गरेर सोधे तब थाहा भयो कि अघिल्लो वर्षको भ्यालेन्टाइनमा जिम त्यहाँ गएका थिए । त्यतिबेला उनलाई डाक्टरले भनिसकेका थिए कि उनको आयु ४ महिना मात्र बाँकी छ ।
जिमले त्यहाँ हरेक वर्षको भ्यालेन्टाइन डेको लागि गिफ्ट र फूल बुक गरेका थिए र हरेक वर्ष भ्यालेन्टाइनमा शैलीलाई पठाउनको लागि अर्डर दिइसकेका थिए । जिमले शैलीको बाँकी जीवनभरको लागि गिफ्ट आफ्नो मृत्युभन्दा पहिल्यै तयार गरिसकेका थिए । शैलीका अनुसार जिमले यो काम तब गरेका थिए जब उनलाई थाहा भइसकेको थियो कि अर्को वर्षको भ्यालेन्टाइनसम्म उनी जीवित रहने छैनन् ।